Apple ụlọ ahịa Singapore, beta 2 macOS 10.12.6, MacBooks ọhụrụ maka WWDC na ọtụtụ ndị ọzọ. Kacha mma n'izu na m si Mac | Esi m mac
Apple ụlọ ahịa Singapore, beta 2 macOS 10.12.6, MacBooks ọhụrụ maka WWDC na ọtụtụ ndị ọzọ. Best nke izu na m si Mac
Jordi Gimenez | | Noticias, Mac kọmputa
Ọ fọrọ naanị awa ole na ole ka anyị ga-amalite nke mbụ nke Apple bụ isi nke afọ a 2017 Eziokwu bu na anyi nile choro ka ihe a bido n’ozi. Mana ọ bụrụ na nke a emeghị, anyị ga-anụ ụtọ ụbọchị ụka nke izu ụka ma karịa ihe niile anyị ga-ahụ ụfọdụ n'ime akụkọ kacha pụta ìhè n'izu ahụ. N'okwu a, ụfọdụ n'ime ha doro anya na-ezo aka na ihe omume Apple echi, mana ọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere na ha agaghị apụta ebe asịrị banyere ngosi nke Apple na banyere ngwaahịa a na-anụ asịrị metụrụ anyị ndị hụrụ Mac n'anya.
N'ụzọ ezi uche dị na ya, na isi okwu mbụ nke afọ a ihe a na-atụ anya ya bụ ngwanrọ, ya bụ, ndozi na macOS, iOS, watchOS na tvOS, ma ọ dịlarị anya site na asịrị na nkwụsị na Apple nwere ike iwebata MacBook ọhụrụ, nnukwu iPad na ọkà okwu nwere ọgụgụ isi ... Ma ka anyị hapụ nke a maka oge wee soro isi nke izu ahụ gaa.
'Slọ ahịa Apple mbụ nke Singapore, Orchard Road, meghere ọnụ ụzọ ya nye ndị ọrụ Apple. Nke a bụ ihe aghọwo nkịtị na Apple nwere ọtụtụ ụlọ ahịa na gburugburu ụwa n'agbanyeghị na ọtụtụ n'ime anyị chọrọ ka ha nọrọ nso na ebe obibi anyị.
N'aka nke ọzọ anyi nwere a obere nchịkọta banyere ihe anyị nwere ike ịhụ na WWDC ewezuga asịrị ndị na-awagharị awa ole na ole ka e mesịrị. Apple choro isi okwu na ndi oru, yabụ olile anya na ihe niile ha gosiri na-atọ ụtọ.
Betadị beta nke abụọ nke macOS Sierra 10.12.6 Ọ dị n'aka ndị mmepe na nke a pụtara na anyị ga-enwe nsụgharị beta nke nsụgharị usoro a ruo mgbe WWDC gasịrị. Na mgbakwunye, na nsụgharị ikpeazụ ndị a, a na-anwa ịhapụ ihe kachasị mma gbasara ndakọrịta, njehie na ndị ọzọ, ka ọ ghara imetụ ya aka n'ọdịnihu. O doro anya na ahapụkwara beta 2 nke iOS, watchOS na tvOS.
N'ikpeazụ, anyị enweghị ike ịkwụsị ikwu banyere asịrị banyere ọhụrụ MacBook Pro, MacBook Air, 12 ″ MacBook, 10,5-anụ ọhịa iPad Pro, na nke ahụ ga-ekwe omume ọkà okwu nke Bloomberg na-ekwu ga-ewebata anyị echi. Otu ọ dịla anyị ga-ebuputa ihe mkpuchi ahụ na ntanetị ịkọrọ gị ihe niile Apple na-egosi anyị echi na 19: 00 pm
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Apple ụlọ ahịa Singapore, beta 2 macOS 10.12.6, MacBooks ọhụrụ maka WWDC na ọtụtụ ndị ọzọ. Best nke izu na m si Mac
Mepụta akwụkwọ ọnụahịa ndị ọkachamara na Akwụkwọ ọnụahịa Mate maka Mac, n'efu maka obere oge
Anwansi Ime Anwansi gị kwesịkwara nchebe ọzọ ma ọ bụrụ na ịwepụ ya n'ụlọ